င ဝန် န ဒီ: August 2009
ဒီနေ့ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ကျင်းပတဲ့ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာ အတိုက်အခံ ဒီမိုကရက်တစ် ပါတီDPJက အနိုင်ရနေတယ်လို့ မဲပေးပြီးသူတွေရဲ့ သဘောထားစစ်တမ်းတွေ ဖော်ပြပြီးနောက် DPJက အစိုးရသစ်ဖွဲ့ကို စတင်ပြောဆိုနေပါတယ်။
ဂျပန်လွှတ်တော် ၂ရပ်မှာ ပိုပြီးတော့ သြဇာညောင်းတဲ့ အမတ်နေရာ ၄၈၀ရှိတဲ့ အောက်လွှတ်တော်မှာ ဒီမိုကရက်တွေက အမတ်နေရာ ၃၀၀ကျော် ရလိမ့်မယ်လို့ သတင်းမီဒီယာတွေရဲ့ သဘောထား စစ်တမ်းတွေမှာ ဖော်ပြနေပါတယ်။ တကယ်သာ တရားဝင် အနိုင်ရခဲ့ရင် နှစ်ပေါင်း ၅၀ကျော် တောက်လျှောက် အုပ်ချုပ်လာခဲ့တဲ့ လက်ရှိအာဏာရ Liberal Democratic Party (LDP) ရဲ့ အုပ်ချုပ်မှု အဆုံးသတ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံမှာ လက်ရှိရင်ဆိုင်နေရတဲ့ စီးပွားရေး ပြဿနာကို စိုးရိမ်နေကြ သူတွေနဲ့ နိုင်ငံရေး အပြောင်းအလဲကို လိုလားနေတဲ့ အသက်အရွယ်ကြီးတွေက လက်ရှိအာဏာရပါတီကို မဲမပေးကြဘူးလို့ မဲမပေးခင် ကောက်ခံတဲ့ သဘောထားစစ်တမ်းတွေမှာ တွေ့ရပါတယ်။
အတိုက်အခံ DPJဟာ တခြားပါတီငယ်တွေရဲ့ ထောက်ခံမှုနဲ့ အထက်လွှတ်တော်မှာ အနိုင်ရထားပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အောက်လွှတ်တော်မှာပါ အနိုင်ရရင်တော့ DPJ ခေါင်းဆောင် ယူကီအို ဟတိုယာမ ဟာ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ၀န်ကြီးချုပ်သစ် ဖြစ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တရားဝင် မဲရလဒ်တွေတော့ ဂျပန်စံတော်ချိန် တနင်္လာနေ့ အစောပိုင်းလောက်မှာ သိရနိုင်မှာပါ။
၀န်ကြီးချုပ်သစ် ဖြစ်လာဖို့ အလားအလာများနေတဲ့ အသက်၆၂နှစ်အရွယ် မစ္စတာ ဟတိုးယာမ ဟာ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ နိုင်ငံရေး အရ သြဇာညောင်းတဲ့ မိသားစုက ဆင်းသက်လာခဲ့သူ ဖြစ်ပြီး အချမ်းသာဆုံး လွှတ်တော်အမတ်တယောက်လည်း ဖြစ်ပါ တယ်။
သူ့ရဲ့ အဖိုး ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း အီချီရို ဟတိုးယာမ ဟာ ၁၉၅၅ခုနှစ်ကတည်းက တောက်လျှောက် ဂျပန်ကို အုပ်ချုပ် လာတဲ့ LDPပါတီကို တည်ထောင်နိုင်ရေး ကြိုးပမ်းခဲ့သူ တဦးဖြစ်ပါတယ်။ သူကိုယ်တိုင်ကလည်း တချိန်က LDP ပါတီဝင် တဦးဖြစ်ခဲ့သူ ဟတိုးယာမ က အလုံးစုံ အပြောင်းအလဲဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ ကတိပေးထားပါတယ်။
အမေရိကန် Standford တက္ကသိုလ်က အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ရပြီး၊ စကားကို သိမ်သိမ်မွေ့မွေ့ ပြောတတ်သူက ဂျပန် နိုင်ငံကို အမေရိကန် စီးပွားရေးလို အလွန်အကျွံ အရင်းရှင် ဆန်မှုကနေ ဖယ်ခွာအောင်လုပ်မယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။
Posted by ငဝန်နဒီ at 10:04 AM No comments:
စိုးသူ နှင့် ထွန်းအိန္ဒြာဗို
နံနက် (၁၁) နာရီမှ ည (၇) နာရီအထိ ထုတ်လွှင့်မည့် အစီအစဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ တာဝန်ခံ ကိုမင်းမင်းက“ဒီလဆန်း (၈) ရက်ကစပြီး စမ်းသပ်မှုတွေ ထုတ်လွင့်ခဲ့တယ်။ အားလုံးအဆင်ပြေတယ်။ လိုအပ်တဲ့ ပြင်ဆင်မှုတွေ ဖြည့်ပြီးတာနဲ့ လာမယ့်အပတ်မှာ ပုံမှန်လွှင့်မှာဖြစ်တယ်” ဟု ခေတ်ပြိုင်သို့ ပြောသည်။
မြန်မာဘာသာဖြင့် စတင်ထုတ်လွှင့်မည်ဖြစ်သော်လည်း ထိုင်းအပါအ၀င် အခြားတိုင်းရင်းသား ဘာသာများဖြင့်လည်း ထုထ်လွှင့်သွားရန်ရှိသည်ဟု သိရပြီး မဲဆောက်မြို့မှ ကီလိုမီတာ (၃၀) အတွင်း ဖမ်းယူနားဆင်နိုင်မည်ဖြစ်သောကြောင့် နယ်စပ်မြ၀တီမြို့အထိ ရောက်ရှိမည်ဖြစ်သည်။
စမ်းသပ်မှုကို နားထောင်ခဲ့သူ ထိုင်းဆန်စက်ရုံမှအလုပ်သမ မိုးမိုးက “မြန်မာလိုလွှင့်တော့ အများစုနားလည်ပြီး ဗဟုသုတလည်း ရတယ်။ သီချင်းလည်း တောင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့ အလုပ်လုပ်ရင်း နားထောင်လို့ရတယ်။ ရိုးရိုးရေဒီယိုနဲ့ဖမ်းလို့ရတယ်။ လက်ကိုင်ဖုန်းနဲ့လည်းရတော့ ဒီလိုင်းအလုပ်ဖြစ်မယ်” ဟု ပြောသည်။
မြန်မာအလုပ်သမားအရေး ဆောင်ရွက်နေသူ (JACBA) အဖွဲ့၏ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမိုးကြိုးက “အလုပ်သမားရေးအပါအ၀င် အခြားကဏ္ဍ တွေလည်းစုံတော့ ဂရုတစိုက်ထုတ်လွှင့်ဖို့ပဲ အရေးကြီးတယ်။ အဓိက သောတရှင်တွေကို ရင်ဘတ်ထဲက လေးစားမယ်ဆိုရင် သိပ်ကိုအောင်မြင်မယ့် အလုပ်တခုလို့ ယူဆတယ်” ဟု ပြောသည်။
အဆိုပါ ရေဒီယိုလိုင်းကို မဲဆောက်မြို့မှ ကီလိုမီတာ (၃၀) အတွင်း FM 102.5 MEGAHERTZ တွင် ဖမ်းယူရရှိနိုင်သည်ဟု အသံလွှင့်ထုတ်လုပ်ရေးမှူးက ပြောသည်။
MAP အဖွဲ့သည် တိုင်းရင်းသားအလုပ်သမား ကျန်းမာရေးနှင့် ပညာရေးအစီအစဉ်အရ ချင်းမိုင်မြို့တွင်လည်း မြန်မာအလုပ်သမားများအတွက် ရှမ်း၊ ထိုင်း၊ ကရင်၊ အာခါ စသည့် ဘာသာ (၄) မျိုးဖြင့် နေ့စဉ်အသံလွှင့်ပေးနေသည်မှာ (၁၀) နှစ်ခန့်ရှိပြီဟု သိရသည်။
မျိုးချစ်သူ / ၁၃ သြဂုတ် ၂၀၀၉
Japanese pop starNoriko Sakai arrested
TOKYO (AFP) – Japanese pop star Noriko Sakai was arrested on Saturday onadrug possession charge, news reports said.
Sakai, who disappeared after her surfer husband was arrested for possessing illegal stimulants earlier this week, surrendered herself toaTokyo police station on Saturday, public broadcaster NHK and Kyodo News said.
The 38-year-old singer, who was also popular in Taiwan and China and known for her girl-next-door image, largely admitted the allegations, NHK reported, quoting police sources.
Media reports have said her Tokyo home was raided after the arrest of her husband Yuichi Takaso, 41, and that police foundasmall amount of illegal drugs there.
The pop star vanished from public view and had not answered phone calls or emails since Monday when police had asked her to come in for questioning.
Sakai, who made her music debut in 1986, is popular both asasinger and an actress and is also marketing her own line of clothes.
She recently appeared inapromotional video by Japan's Supreme Court to raise public awareness ofanew jury system that was introduced this week.
Immediate confirmation of her reported arrest was not available.
စွယ်တော်ရိပ် သင်္ကြန် DVD ကြော်ငြာ
စွယ်တော်ရိပ် သင်္ကြန် DVD ကြော်ငြာကို http://www.rit-alumni-singapore.org မှာ ကြည့်နိုင်ပါပြီ
မြန်မာရေနံ အင်ဂျင်နီယာ များအတွက်
Hi my dear fresh graduate bros,
I heard UNOG needs fresh grad PE. Contact UNOG u.aungkyaw.oilgas@unogygn.com .
(Aung Myat Kyaw)
Posted by ငဝန်နဒီ at 3:57 PM No comments:
ပြီးခဲ့တာတွေ ပြော တာ.....
လုပ်ခဲ့တာတွေ ပြော တာ.....
ရပ်မဲ့ဟာတွေ ပြော တာ.....
လာမဲ့ဟာတွေ ပြော တာ....
တင်းနေလေရဲ့.....
ကံကိုပဲ ယိုးမယ်ဖွဲ့ 
သူရဲ့ တရားရ ပြီး
အေးနေလေရဲ့.....
အမှန် ထင် နေ သူ...
အမှန် မတွေ့ သေးသူ...
...ဖြစ်မှာပေါ့ က အရိပ်..
...မလုပ်နဲ့က ဘရိတ်..
...ဖြစ်လိမ့်မယ် က နမိတ်..
(မိတ်ဆွေ ....သင်ရောဘယ်တစ် ယောက်လဲ.....
မဖတ်မိသလို နေ ရအောင်... )
တိုးတက်မူတွေ မဝေးတော့ ပြီ.....
ခေတ်ကရပ်နေလို့ မရဘူး...မြန်ပြည်ကြီးကော ...ဆယ်ကျော် သက် သစ်တွေမွေးဖွား လာ သလိုခေတ် လည်း တိုးတက်လာပါတယ်...အခုဆို မြန်မာစာ နဲ့ဖတ်လို့ရ နေပြီ....လူတိုင်း အတွက် ဖြစ် လာ ပြီဆိုရင်... တိုးတက်မူတွေ မဝေးတော့ ပြီ.....မြန်ပြည်သား တိုင်း အရာရာအတွက် ကြိုးစားရင်း အောင် မြင် နိူင်ကြပါစေ။ ။
Posted by ငဝန်နဒီ at 11:12 PM No comments:
စားသောက်ကုန် ဓာတ်ခွဲခန်း ဆောက်ရန် ဂျပန်နှင့် ဆွေးနွေးနေ
စားသောက်ကုန် အရည်အသွေးထိန်း ဓာတ်ခွဲခန်းတခုကို မြန်မာနိုင်ငံ စားသောက်ကုန်ထုတ် လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းက ဂျပန် အကူအညီဖြင့် တည်ဆောက်နိုင်ရန် ညှိနှိုင်းနေသည်။
မြန်မာစစ်အစိုးရ၏ တခုတည်းသော FDA ဓာတ်ခွဲခန်းကိုသာ အားကိုးနေရာမှ အရပ်ဘက် စားကောက်ကုန် အရည်အသွေး ထိန်းသိမ်းမည့် အစီအစဉ်ကို အစပျိုးလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
“ဂျပန်က အကူအညီနဲ့ ဆောက်ရမှာပါ။ အခု ညှိနှိုင်းနေတုန်းပါ။ ဘာမှတော့ အကောင်အထည် မပေါ်သေးဘူး။ ” ဟု စားသောက်ကုန်ထုတ် လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း တာဝန်ရှိသူတဦးက ပြောသည်။
FDA သည် တရက်လျှင် စမ်းသပ်မှု အကြိမ်ပေါင်း ၃၀ သာ ပြုလုပ်နိုင်သဖြင့် စားသောက်ကုန်များ အရည်အသွေး ထိန်းသိမ်းရန် အခက်အခဲရှိခဲ့သည်။
ယခုနှစ်အတွင်း FDA က ပြည်တွင်း စားကုန်များဖြစ်သည့် လက်ဖက်နှင့် ငပိ တို့ကို အဝါရောင်ဆိုးဆေး ပါရှိသည်ဟုဆိုကာ ရောင်းချခွင့် ပိတ်ပင်ပြီးနောက် စားသောက်ကုန် ထုတ်လုပ်သူများသည် ပစ္စည်းအရည်အသွေး ထိန်းချုပ်ရန် ပိုမို စိတ်ဝင်စားလာခဲ့ကြောင်းနှင့် ထုတ်ကုန် လုပ်ငန်းရှင်များတွင်လည်း အရည်အသွေးထိန်း ဓာတ်ခွဲခန်းများ မပြည့်စုံခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဖြစ်ပေါ်လာမည့် အရပ်ဘက် ဓာတ်ခွဲခန်းသည် စားသောက်ကုန် အရည်အသွေး ထိန်းသိမ်းပေးခြင်း (Quality Control) အတွက်သာဖြစ်ပြီး၊ အရည်အသွေး စစ်ဆေးခြင်း (Quality Check) ကိုမူ အစိုးရ FDA ကသာ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည်။
“ကျနော်တို့ဆီမှာက စစ်လိုက်လို့ မကောင်းဘူးဆိုရင် အရေးယူခံရမယ်လေ။ ပြင်ချိန်မရဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဒီလို အပြင်ဓာတ်ခွဲခန်းတွေ ရှိလာမယ်ဆိုရင်တော့ သူတို့ထုတ်ကုန် မကောင်းဘူးဆိုရင် ပြင်ချိန်ရတယ်။ ထုတ်ကုန်ကို ပြင်ဖို့ အချိန်ရတာပေါ့။ ဒါမျိုး အကျိုးအမြတ်တော့ ဖြစ်တာပေါ့” ဟု ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ FDA မှ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာကျော်လင်းက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
“အခုထုတ်နေတဲ့ စက်ရုံတွေမှာက ဓာတ်ခွဲခန်း အပြည့်အစုံ မရှိဘူး” ဟု သူက ဆက်ပြောသည်။
စားသောက်ကုန်များကို အရည်အသွေး အာမခံချက် မပေးနိုင်သဖြင့် ပြည်ပဈေးကွက်သို့ တင်ပို့နိုင်ခြင်း မရှိဘဲ ပြည်ပရောက် မြန်မာများအတွက်သာ အနည်းငယ် တင်ပို့ရောင်းချနိုင်ကြောင်း စားသောက်ကုန်ထုတ် လုပ်ငန်းရှင် တဦးက ဆိုသည်။
ဓာတ်ခွဲခန်း ကုန်ကျစရိတ်နှင့် နည်းပညာ အခက်အခဲကြောင့် ဂျပန်နိုင်ငံမှ အကူအညီ တောင်းရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသော်လည်း ကုန်ကျစရိတ် အသေးစိတ်ကိုမူ မသိရသေးပါ။
မလေးရှားနိုင်ငံရောက် မြန်မာနိုင်ငံသား (၆) ဦးကို ဂိုဏ်ဖွဲ့ကာ လူသတ်မှုကျူးလွန်ခဲ့သည့်အတွက် မလေးရှားတရားရုံးချုပ်က ယနေ့ သေဒဏ်ပေးလိုက်သည်။
၎င်းတို့ (၆) ဦးသည် ၂၀၀၅ ခုနှစ်၊ ဇွန်လအတွင်း မြန်မာ-မွတ်စလင်တဦးဖြစ်သည့် ဆာဒစ်ဟူစိန်ကို ဂိုဏ်ဖွဲ့သတ်ဖြတ်ခဲ့ခြင်း အတွက် သေဒဏ်ပေးခံကြရခြင်းဖြစ်ကြောင်း မလေးရှားနိုင်ငံရှိ မြန်မာတဦးက ပြောသည်။
၎င်းက “သူတို့က ဂိုဏ်ဖွဲ့ပြီး မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ရုံသာမကဘူး၊ တခြားမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုလည်း ခြိမ်းခြောက် ငွေညှစ်နေတဲ့သူတွေပါ။ ညပိုင်းတွေမှာ လမ်းမှာတွေ့လို့ ဖမ်းဆီးပြီး သူတို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ မိန်းကလေးတွေလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ ဒီလိုကြိုးပေးခံရတာဟာ ထိုက်သင့်တဲ့ ပြစ်ဒဏ်ခံရတာပါပဲ” ဟု ပြောသည်။
မလေးရှားတရားရုံးချုပ်က သေဒဏ်ချမှတ်လိုက်သူများမှာ အောင်စိုးဦး (ခ) စလမ်၊ ၀င်းနိုင် (ခ) ကာစင်၊ နဂုရာရှစ်၊ မွန်ဂျီ (ခ) အက်ကာရင်ဟာရှင်း၊ ဆိုင်ဒူလဒ် (ခ) စိုးစိုးနှင့် ဇော်ဦးတို့ဖြစ်ကာ ၎င်းတို့သည် မြန်မာ-မွတ်စလင်များဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“သူတို့က ဆလာယမ်ဈေးကြီးတ၀ှိုက်မှာ ကျက်စားနေတဲ့ ဂိုဏ်စတားတွေပါ။ သူတို့ကို တရုတ်သူဌေးတယောက်က ကျောထောက်နောက်ခံပြုပေးထားတယ်” ဟု မလေးရှားရှိ မြန်မာတဦးက ပြောသည်။
မြောက်ကိုရီးယား ဖမ်းဆီးခံ အမေရိကန်သတင်းထောက် ၂ ဦး ဌာနေပြန်ရောက်
မြောက်ကိုရီးယားမှာ ၅ လနီးပါး ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီး အမေရိကန် သမ္မတဟောင်း ဘီလ်ကလင်တန် က စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုတွေ လုပ်ခဲ့တဲ့နောက် ပြန်လွတ်လာတဲ့ အမေရိကန် သတင်းထောက် ၂ ယောက် ဌာနေကို ပြန်ရောက်လာပါပြီ။ သမ္မတဟောင်း ဘေကလင်တန် နဲ့အတူ လော်ရာလင်း (Laura Ling) နဲ့ ယူနာလီး (Euna Lee) တို့နှစ်ဦးဟာ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် ဘားဘန့်က် (Burbank) ကို ဒီကနေ့ပဲ လေကြောင်းကနေ ပြန်ရောက်လာကြတာပါ။
သမ္မတ ကလင်တန် ဟာ ပြုံယမ်းကို သွားရောက်ပြီး မြောက်ကိုရီးယား ခေါင်းဆောင် ကင်ဂျုံအီး (Kim Jong Il) နဲ့ တွေ့ဆုံ ညှိနှိုင်းပြီးတော့ အခုလို သူတို့နှစ်ဦး ပြန်ရောက်လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ လေယာဉ်ပေါ်က ဆင်းလာတဲ့ သမ္မတဟောင်းနဲ့ သတင်းထောက်နှစ်ဦးကို လေယာဉ်ပေါ်က ဆင်းဆင်ချင်းဆိုသလို ၀ိုင်းဝန်းပြီး ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ ကြိုဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ သမ္မတ အိမ်ဖြူတော်ကလည်း ဒီလို ပြန်လွတ်လာတဲ့အပေါ် အလွန်ပဲ ၀မ်းမြောက်ရတဲ့အကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
သူတို့နှစ်ဦးကိုတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ မတ်လက မြောက်ကိုရီးယားက ဖမ်းဆီးခဲ့တာပါ။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ တရုတ်နိုင်ငံ နယ်စပ်က တဆင့် မြောက်ကိုရီးယားထဲကို တရားမ၀င် ၀င်ရောက်ခဲ့တဲ့အတွက် ဒါဟာ အစိုးရကို ဆန့်ကျင်တာဖြစ်တယ် ဆိုပြီး အလုပ်ကြမ်း နဲ့ ထောင်ဒဏ် ၁၂ နှစ် အပြစ်ပေးခဲ့တာပါ။
မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင် ကင်ဂျုံအီး ကတော့ သမ္မတ ကလင်တန်နဲ့ တွေ့ဆုံပြီး သူတို့တွေရဲ့ လုပ်ရပ်နဲ့ပတ်သက်လို့ ရိုးသားတဲ့ တောင်းပန်မှုမျိုး ရခဲ့လို့ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ရခဲ့တာလို့ အစိုးရပိုင် သတင်းတွေက ဖော်ပြပါတယ်။
အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးလည်းဖြစ်၊ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုတွေ လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ သမ္မတဟောင်း ကလင်တန် ရဲ့ ဇနီးလည်း ဖြစ်တဲ့ ဟီလာရီ ကလင်တန် ကတော့ သူ့ခင်ပွန်းအနေနဲ့ သတင်းထောက်နှစ်ဦးနဲ့ ပတ်သက်လို့ တောင်းပန်တိုးလျှိုးမှုတွေ လုပ်ခဲ့တယ်လို့ ပြောဆိုတာတွေဟာ မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
ဖိလစ်ပိုင် သမ္မတဟောင်း ကိုရာဇွန် အကွီနို (Corazon Aquino) ကွယ်လွန်သွားပြီလို့ သူ့မိသားစုက ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ မစ္စ အကွီနို ဟာ အူမကြီးကင်ဆာ ရောဂါ တနှစ်ကျော်ကြာ ခံစားခဲ့ရပြီး အခု အသက် ၇၆ နှစ်မှာ ကွယ်လွန်ခဲ့တာပါ။
မစ္စ အကွီနိုဟာ သမ္မတ အဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့တဲ့ ၁၉၉၂ ခုနှစ်အထိ သူမဆီက ၆ ကြိမ်ထက်မက အာဏာသိမ်းဖို့ ကြိုးစားတာတွေကို ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ သူမဟာ ၁၉၈၃ ခုနှစ်မှာ လုပ်ကြံခံခဲ့ရပြီး ကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့ အတိုက်အခံ ခေါင်းဆောင် ဘန်နီနို အကွီနိုရဲ့ ဇနီး ဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၈၆ ခုနှစ်မှာတော့ တိုင်းပြည်မှာ နှစ်အတော်ကြာအောင် အုပ်ချုပ်လာခဲ့တဲ့ သမ္မတ ဖာဒီနန် မားကို့စ် ကို ယှဉ်ပြိုင်အံတုပြီး ကိုရာဇွန် အကွီနို က သမ္မတ အဖြစ် ၀င်ပြီးတော့ အရွေးခံခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ ရွေးကောက်ပွဲဟာ သမ္မတ မားကို့စ် က သူပဲ အနိုင်ရအောင် စိတ်ကြိုက် စီစဉ်ခဲ့တာလို့ စွပ်စွဲမှုတွေ ပေါ်လာပြီးနောက်ပိုင်း မကျေနပ်တဲ့ စွပ်စွဲမှုတွေကို ကိုရာဇွန် အကွီနိုက ဦးဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
စားသောက်ကုန် ဓာတ်ခွဲခန်း ဆောက်ရန် ဂျပန်နှင့် ဆွေးေ...
မြောက်ကိုရီးယား ဖမ်းဆီးခံ အမေရိကန်သတင်းထောက် ၂ ဦး...